म्यूजिक सुन्दै निदाउनु सही वा गलत ?
मङ्गलबार, असार ०२, २०७७
म्युजिक र निद्राका बीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। जब संगीतले आनन्द दिन्छ तब मानिस मस्तसँग निदाउँछ। कसैक कसैको त म्युजिक नसुनी निदाउँनै नसक्ने बानी बन्छ।
तर के यो बानी सुरक्षित छ त ? स्वास्थ्योवर्द्धक हो त ? हामीले जान्न जरूरी छ। यसबारेमा विशेषज्ञहरू नै यसो भन्छन्-
धेरै लामो समयदेखि भनिँदै र भोगिँदै आएको छ कि म्यूजिकले आनन्द र राम्रो निन्द्राका लागि मद्दत गर्न सक्छ तर हामी यो बिर्सिदिन्छौँ कि हाम्रो शरीरमा एक आन्तरिक घड़ी हुन्छ जसलाई सरकैडियन रिदम पनि भनिन्छ र यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ ।
हामी शरीरलाई कुुनै अरु नै साउण्डमा निर्भर गरिरहेका हुन्छौँ जसले हामीलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यदि हामीले नियमित रुपमा आर्टिफिशियल साउण्ड सुनेर निदाउने बानी राखेका छौँ भने यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन ।
म्यूजिक सुनेर नै हामीलाई राम्रो निन्द्रा लाग्छ भने पक्कै पनि म्यूजिक सुन्नुपर्छ तर एयरफोन लगाएर होइन ।फोनलाई बिस्ताराबाट अलि टाढा राखेर सानो आवाजमा म्यूजिक सुन्दा राम्रो हुन्छ ।